Afriikaa - BBC News Afaan Oromoo
...tti maxxanfame 4:144:14
Lammileen Afrikaa mil. 40tti dhiyaatan hiyyoomuun biliyeenaroonni muraasni caalatti sooroman –Oksifaam
Yeroo weerara koronaavaayirasiitti lammiileen Afrikaat, biyyoota Sahaaraan gadii hedduun wayita hiyyooman, biliyeenaroonni ardichaa ammoo caalaatti durooman jedha gabaasi dhaabbata gargaarsaa Oksifaam.
...tti maxxanfame 8:00 11 Amajjii 20228:00 11 Amajjii 2022
Senegaal goolii Maaneen yoo injifattu, Gaanaan Morookoon injifatamte
Tapha jalqabaa Garee Btiin Senegaal goolii 1-0n Zimbaabuwee yoo injifattu Maaneen peenalitiin daqiiqaa dhumaa irratti goolii galche.
...tti maxxanfame 9:02 7 Amajjii 20229:02 7 Amajjii 2022
Wantoota ijoo waa'ee waancaa Afrikaa beekuu qabdan
Taphattoonni ciccimoon liigota Awurooppaa keessatti taphatan gara Kaameruun qajeelu. Taphni jalqabaas biyyattii qopheessitu Kaameruun fi Burkinaa Faasoo walitti fida.
...tti maxxanfame 13:25 6 Amajjii 202213:25 6 Amajjii 2022
Chaayinaan Gaanfa Afrikaatti Ergamaa Addaa muuduuf ta'u beeksiste
Rakkoo nageenyaa bakkeewwan Gaanfa Afrikaa jiru qolachuuf Chaayinaan ergamaa addaa muuduuf akka ta’e beeksiste. Kana dura Ameerikaa, Gamtaa Awurooppaafi Gamtaan Afrikaa Gaanfa Afrikaatti ergamaa addaa muudaniiru.
...tti maxxanfame 4:07 3 Amajjii 20224:07 3 Amajjii 2022
Gaaffii eenyummaa: Akka Afrikaatti kan lakkaa'aman eenyufaadha?
Sagantaa walitti aanee dhiyaatu barreessitoonni Afrikaa irratti hirmaataniin gaazexeessaan Aljeeriyaa-Kanaadaa ta'e Maaher Mezaa'ii yeroo ardittiin qophii dorgommii kubbaa miilaa guddaa Afrikaa Waancaatiif qophaa'aa jirtutti eenummaan Afrikaa maalidha? Kan jedhu xiinxaleera.
...tti maxxanfame 9:08 1 Amajjii 20229:08 1 Amajjii 2022
'Covid-19 bara haaraatti ni mo'ama abdii jedhun qaba' -Dr Teedroos Adhaanoom
Hogganaan Olaanaan Dhaabbata Fayyaa Addunyaa Dr Tedroos Adhaanoom biyyoonni addunyaa waliin kan hojjatan yoo ta'e Covid-19 bara eegalame 2022 kanatti ni mo'atama abdii jedhu qabaachu ibsan.
...tti maxxanfame 7:38 31 Muddee 20217:38 31 Muddee 2021
Sudaaniitti hiirira mormii Kamisa taasifameen namoonni afur ajjeefaman
Sudaan keessatti hiriira mormii motummaa itti fufee gaggeeffamee irratti tarkaanfii humnootii nageenyaatiin fudhatameen Kamisa Muddee 29, 2021 namoonni afur ajeefamuun dhagahame.
...tti maxxanfame 4:08 31 Muddee 20214:08 31 Muddee 2021
Gameessa muuziqaa Alamaayyoo Isheetee dabalatee namoota jajjaboo Afrikaan bara 2021 keessa dhabde
Bara faranjootaa 2021 xumuramaa jiru kana keessa Afrikaan namoota gameeyyii biyyasaanii maqaa waamsisan akkasumas kanneen dubbii walxaxaan beekaman dhabdeetti. Isaan eenyufaadha?
...tti maxxanfame 9:34 29 Muddee 20219:34 29 Muddee 2021
Biyya Afriikaa omisha anniisaa haayidiroojiiniin beekkamtii argachuuf karoorfatte
"Amma kunoo dhumarratti maappii gubbaarratti argamna,'' jedhan Filiipp Baalhoowaa, waa'ee magaalaa kibba Naambiyaa qarqara galaanaa oongeen hamaan mudatee Lüdaritiiz ilaalchisuun. Magaalaan qarqara galaanaa tunis duraan daldala almaaziifi qurxummiitiin galii olaanaa argataa kan turet yoo ta'u, amma garuu hojii dhabdummaafi duluma buu'uuraalee misoomaatiin kan ka'ee rakkoo keessatti argamti.
...tti maxxanfame 4:27 27 Muddee 20214:27 27 Muddee 2021
Aanga'oonni nageenyaa Sudaan tarkaanfii hiriirtota irratti fudhataniin himataman
Humnootiin nageenyaa Sudaan namoota mormii fonqolcha mootummaa waraanaan gaggeeffameef magaalaa guddiittii biyyattii Kaartuum keessatti bahan irratti tarkaanfii humnaan olii fudhachuun himataman. Walitti bu'iinsa namoota hiriiraaf bahaniifi humnootii nageenyaa jidduutti naannoo masaraa mootummatti umameen namoota 178 irra miidhaan qaqqabuutu gabaafame.
Page 1 Keessaa 25